Global Voices teny Malagasy » Tovolahy Namono Tena Rehefa Avy Nataon’ny Polisy Famotorana Tao Singapaoro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Febroary 2016 4:54 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Singapaoro, Lalàna, Mediam-bahoaka, Tanora, Zon'olombelona
Mari-pahatsiarovana avy amin'ny naman'i Benjamin Lim napetraka teo amin'ny fandrianany. Sary avy amin'ny The Online Citizen
Namono tena ny mpianatra iray 14 taona tao Singapaoro ora vitsy taorian'ny famotorana nataon'ny polisy azy noho izy voarohirohy tamina raharaham-pikasikasihan-tanana fametavetana iray, izay niteraka ny tokony handinihana indray  ny paikam-pamotorana ofisialy ahafahan'ny polisy manadihady ireo ankizy tsy ampy taona na dia tsy eo anatrehan'ny ny ray aman-dreny, na mpikarakara, na olon-dehibe mpanolo-tsaina aza.
Tamin'ny 26 Janoary, 2016, nalain'ireo polisy manamboninahitra dimy nanao fanamiana sivily tany an-tsekoly i Benjamin Lim mba hatao “antsafa” any amin'ny biraon'ny polisy. Voampanga ho nanao fikasihan-tanana tsy fampiseho masoandro ankizy 11 taona tao amin'ny trano fonenana iray teo akaiky teo ity tovolahy ity. Nandritra ny famotorana, izay naharitra adiny telo, tsy niaraka tamin'ny ray aman-dreniny i Lim. Nilaza ny polisy fa niaiky ny heloka izy, na dia nilaza tamin'ny reniny aza izy avy eo fa tsy manan-tsiny. Namono tena izy rehefa tonga tany an-trano.
Nanontany ny antony hampandehanana manamboninahitra miisa dimy hisahana raharahan'ankizy iray tsy ampy taona ny fianakavian'i Lim. Mino ihany koa izy ireo fa nikorontan-tsaina nandritra ny famotorana tao anatin'ny biraon'ny polisy ilay tovolahy.
Nahatonga ny olona maro mitaky handinihana indray ny fomba fiasan’ ny polisy mikasika ny fomba mety sy sahaza amin'ny fisahanana ny ankizy sy ny sokajin'olona hafa marefo eo amin'ny vahoaka ny fahafatesany. Nanaiky izany ny polisy ary namoaka  fanambarana milaza fa hanao izany:
Nangatahana ny polisy raha tokony handinika indray ny fomba fiasa mba ahafahan'ny olon-dehibe miatrika ny famotorana rehefa atao famotorana ny tanora tsy ampy taona. Handinika sy hamaha ity olana ity ny polisy.
Nahatsapa  ny rain'i Lim fa tara loatra ny fandinihana indray:
As Benjamin’s father, I felt this is necessary, but it came too late. It is necessary because we pray that the same treatment my son received from the police, will never ever happen again to another child.
Araka ny lazain'ny rain'i Benjamin, tsapako fa ilaina izany saingy tratra aoriana loatra. Tena ilaina satria maniry izahay mba tsy hitranga intsony amimn'ny ankizy hafa ny fomba nitondran'ny polisy ny zanako lahy.
Taorian'ny tatitra momba ny fahafatesan'i Lim, nizara ny fomba fitondran'ny polisy azy ireo tahaka izany mandritra ny taonan'ny fahatanoran'izy ireo ny sasany. Nisy mihitsy aza tranga iray izay zokiolona manana fahasembanana ara-tsaina  no nosamborin'ny polisy ary natao famotorana tsy natrehan'ny havany.
Nihevitra  ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona Community Action Network (Tambajotra Miasa ho an'ny Fiarahamonina) fa afaka nosorohana ny fahafatesan'i Lim raha naneho hatairana manoloana ny fanadihadiana ankizy tsy ampy taona [tsy atrehin'olondehibe] ny olona rehetra nandray anjara tamin'ny fanadihadiana ity raharaha ity. “Nandrisika hametrahana fakantsary ao anatin'ny efitra fanaovana famotorana ihany koa izany mba hahatonga ny dingana ara-panadihadiana ho mangarahara kokoa:
We find it absurd that while public spaces are heavily surveilled with security cameras, interrogation rooms are not fitted with any cameras to allow for transparency of the interrogation process, which may be useful in an incident like this.
Narovana tamin'ny alalan'ny fanangonan-tsonia antserasera ihany koa ity fitakiana manokana ity:
We believe that transparency is important when it comes to police investigations, especially when minors are involved. To that end, we support the police’s piloting of video recordings during questioning, and urge Parliament to pass legislation that would require mandatory video recordings of all police interrogations.
Mino izahay fa zava-dehibe ny mangarahara raha famotoran'ny polisy no resahana, indrindra raha tafiditra ny ankizy tsy ampy taona. Amin’ izany, tohananay ny fanarahamaso atao amin’ ny polisy amin'ny alalan'ny fandraketana an-dahatsary mandritra ny famotorana, ka mandrisika ny Parlemanta mba handany lalàna mitaky fandraketana an-dahatsary tsy maintsy atao amin’ ny famotorana rehetra ataon'ny polisy.
Nandrisika ny polisy mba hanaja  ny zon'ny voarohirohy, indrindra ny ankizy tsy ampy taona ny Fikambanam-behivavy Mikatroka sy Mikaroka, izay mifantoka kokoa amin'ny raharahan-kerisetra ara-nofo:
If there is a general perception that criminal investigations may be unduly harsh or traumatic, especially for minors, this may deter victims from reporting. It is in everyone’s interest that criminal investigations respect the rights of suspects.
Raha misy ny fomba fijery ankapobeny fa mety henjana loatra sy mampivarahontsana ny famotorana raharahan-keloka bevava, indrindra amin'ny zaza tsy ampy taona, dia mety hahakivy ny lasibatra ny hitatitra izany. Tombontsoan'ny tsirairay ny fanajan'ny famotoran-keloka bevava ny zon'ny voarohirohy .
Mandritra izany, nanontany ny fahanginan'ny minisiteran'ny governemanta voakasik'izany raharaha izany ny mpanohitra avy ao amin'ny Antoko Demokraty Singapaoro:
The Ministers for Law, Education, and Home Affairs have kept silent on the matter. Given that a teenager has committed suicide resulting from a series of actions involving the police and the school, it behooves the Ministers to, at the minimum, address the situation and see how the matter is resolved and future incidents prevented.
Tsy niloa-bava tamin'ny raharaha ny Minisitry ny Lalàna, ny Fanabeazana, sy ny Raharaha Anatiny. Satria tanora herotrerony no nahavita ny namono tena vokatry ny fisesin'ny hetsika mahasaringotra ny polisy sy ny sekoly, anjaran'ny minisitra, farafahakeliny, no miatrika ny zavamisy ary mijery ny fomba hamahana ny raharaha sy hisorohana ny loza tsy hitranga rahatrizay.
Ny antony voalohany mahatonga ny famonoan-tena dia ny fahakiviana sy harerahan-tsaina tsy voakarakara. Azo tsaboina ny harerahan-tsaina ary azo sorohina ny famonoan-tena. Mety mahazo fanampiana avy amin'ny laharan-telefonina fanohanana amin'ireo mitady hamono tena na tratran'ny krizy ara-pihetseham-po ianao. Tsidiho ny Befrienders.org  raha hijery laharana fanampiana momba ny fisorohana ny famonoan-tena ao amin'ny firenenao.[naotin'ny mpanitsy amin'ny teny malagasy: indrisy fa tsy misy ny mpanolo-tsaina misoroka izany rehefa nijery ny tranonkala aho hatreto, asa sao dia mahafantatra ianareo?]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/02/19/79256/
 Namono tena : http://www.theonlinecitizen.com/2016/01/14-year-old-jumps-to-his-death-after-unaccompanied-police-interrogation/
 ny tokony handinihana indray: https://asiancorrespondent.com/2016/02/the-tragic-case-of-benjamin-lim-is-singapores-justice-system-flawed/
 nizara : http://www.theonlinecitizen.com/2016/02/14-year-olds-death-spurs-a-mother-to-speak-up-on-sons-similar-experience/
 fahasembanana ara-tsaina: http://www.theonlinecitizen.com/2016/02/father-with-dementia-forced-to-confess-to-a-offence-by-police/
 fanangonan-tsonia antserasera : https://www.change.org/p/ensure-protection-of-minors-during-police-investigations
 nanontany : http://yoursdp.org/news/ministers_39_silence_on_benjamin_lim_39_s_suicide_troubling/2016-02-05-6097